အံ့သြစရာ 10 သွားတိုက်ဆေးကိုအသုံးပြုသည် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ • အကြံပြုချက်များ • အကြံပြုချက်များ Sant • လှပမှု • ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေး • စောင့်ရှောက်မှု "10 အံ့သြစရာအသုံးပြုမှုသွားတိုက်ဆေး
Alexis WAYAN 1 မတ်လ 2019
Le သွားပွတ်ဆေး ငါတို့အံသွားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှုဂရုစိုက်ကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်သူကအများကြီးပိုမိုအသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါသည် 10 အံ့သြစရာအသုံးပြုမှုသွားတိုက်ဆေး : ဘက်စုံ, ထိုသွားတိုက်ဆေး,
1 ။ အများဆုံးအဖြူရောင်လက်သည်းများအတွက်
တောက်ပသောလက်သည်း, သူတို့ညင်ညင်သာသာအနည်းငယ်သွားတိုက်ဆေးနှင့်အတူ massaged နေကြသည်။
2 ။ နာကျင်မှုမှသက်သာရာရစေရန်
3 ။ အင်းဆက်ပိုးမွှားကိုက်ချွေးသိပ်ဖို့
ခြင် - - နွေရာသီရဲ့အဆိုးဆုံးပိုးမွှားတန်ပြန်ရန်သွားတိုက်ဆေးအကြီးအကူအညီနဲ့၏နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာယားယံအင်းဆက်ပိုးမွှားကိုက် soothes ။
4 ။ အရည်ကြည်ဖုဆက်ဆံဖို့
5 ။ ပိုမိုမြန်ဆန်ခလုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်
အဆိုပါဂန္လှည့်ကွက်: နေ့ချင်းညချင်းအခြောက်တစ်ခလုတ်ကိုသွားတိုက်ဆေးချပြီး။ သွားတိုက်ဆေးများ၏ဆန့်ကျင်ဘက်တီးရီးယားဂုဏ်သတ္တိများရီဖိုင်းဝက်ခြံကျော်လွှားအတွက်ထိရောက်သောများမှာ!
6 ။ ဦးထုပ်ဖို့
သင်ပိုမိုဆံပင်ဂျယ်ဆိုရသလော အဆိုပါသွားတိုက်ဆေးမှ Turn! ကအနည်းငယ် flyaways ယဉ်နိုငျသညျ, သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုသုံးပါ။
7 ။ ပြောက်ကျားနီခြင်းမှ
8 ။ အစွန်းအထင်းကိုဖယ်ရှားရန်
အသေးစားလက်တွေ့ကျတဲ့အရာ: သွားတိုက်ဆေးအဝတ်အစားအပေါ်အချို့သောအစွန်းအထင်းဖယ်ရှားရန်နိုင်ခဲ့သည်။ (လိုအပ်ပါက!) ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးနံရံပေါ်ထည်ပေါ်တွင်လည်း crayon အမှတ်အသားများဖယ်ရှားခြင်းအဘို့အထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
9 ။ အနံ့ကိုလိုက်ရန်
သငျသညျကြက်သွန်ဖြူသို့မဟုတ်ကြက်သွန်လှီးဖြတ်ခြင်းနှင့်ကိုလက်နှင့်တစ်ခုမနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့ရှိသည်? သွားတိုက်ဆေးတစ်နည်းနည်းသူတို့နှင့်အတူဆေးကြောပါ။ ချော, မကောင်းတဲ့အနံ့!
10 ။ fogging ကာကွယ်တားဆီးဖို့
ရေချိုးခန်း၏ထွက်ပေါက်မှာ fogging ရှောင်ရှားရန်, အထည်ပေါ်သွားတိုက်ဆေးတစ်ပဲဝတ်နှင့်သင့်ပြတင်းပေါက်များနှင့်ကြေးမုံပွတ်ပေးပါ။ သွားတိုက်ဆေး၏အလွန်သေးငယ်သောအလွှာအစိုဓာတ်ကိုတစ်ဦးအတားအဆီးဖြစ်လိမ့်မည်။ မိတ်ကပ်မလျှောက်ထားမီစောင့်ဆိုင်းရန်မလို, ကြီးသော! SOURCE မှ: တစ်နေ့တာသူတို့ကိုကြည့်ရှု
10 ကျန်းမာရေးအပေါ်ဂျင်း၏အကျိုးခံစားခွင့် ... နှင့်အန္တရာယ်များ!
ရင်သားကင်ဆာ: တောင်မှ 75 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်, အန္တရာယ်ရှိတယ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်
xnxx - ထို Bronx, 41 နှစ်များတွင်တစ်ဦးကအထက်တန်းကျောင်းဆရာမ "လို့မှောင်မိုက် web ပေါ်မှာဖလှယ်ကလေးညစ်ညမ်းရှိခြင်းအတွက်" ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်
Youtube ကို: 17 THE အမြိုးသမီးတှေဘောလုံးသမား 2017 မီနှင့်အပြီး
UANL vs. ဆန်းတို့စ - ဘောလုံးပွဲအစီရင်ခံစာ - ဧပြီလ32019 - ESPN
ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ်58
ကွန်ဂို - ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ - ဂျော့ဘ်2
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်16,371